एक सर्वेक्षण ६२ प्रतिशत महिलालाई सेक्स गर्दा पार्टनरको यस्तो व्यवहार मनपर्छ ! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
एक सर्वेक्षण ६२ प्रतिशत महिलालाई सेक्स गर्दा पार्टनरको यस्तो व्यवहार मनपर्छ !
यौनको विषयमा कुराकानी गर्न वर्जित छ । अझै महिलाहरुले यौनको बारेमा खुल्ला भएर कुराकानी गरे भने त उनीहरुलाई अनेक लान्छना लगाइन्छ । त्यसैले पनि महिलाहरु यौन वा सेक्सको बारेमा त्यति खुल्दैनन् । यौनको बारेमा सबैलाई चासो भएपनि सबैले यसलाई दबाएर राख्छन् ।
यस्तोमा तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग बेडमा एक गरमागरम समय बिताउँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो पार्टनरलाई बेडमा के कुराले अझै बढी आनन्द दिन्छ भन्ने कुरा थाहा भएमा तपाईले आफ्नो यौन जीवनलाई अझै रोमाञ्चक बनाउन सक्नुहुन्छ ।
यौनको विषयमा सबैको फरकफरक रुची र चाहना हुन सक्छ तर, यस विषयमा हाम्रो समाजमा पति पत्नी वा यौनसाथीहरु एक आपसमा खुलेर कुरा गर्न हिच्किचाउँछन् । अझै महिलाहरु त झनै यसबारेमा कुरा गर्दा लाजले रातो पिरो हुन्छन् ।
यस्तैमा एक अनलाईन डेटिङ साइटले गरेको एक सर्वेक्षणका अनुसार यौनको विषयमा रोचक र अचम्मको तथ्यहरु अगाडि आएको छ । सर्वेक्षणमा महिलाहरुलाई सेक्सगर्दा के कुराले अझै बढी उत्तेजित बनाउँछ वा उनीहरुलाई के गर्न मनपर्छ भनेर सोधिएको थियो ।
सर्वेक्षणबाट के के खुलासा भयो ?
महिलाहरुले यस्तो मनपराउँछन्
यी कुराहरु पनि मन पर्छ
तर, कैयौ पटक भने सेक्सको बारेमा आफ्नो रुची र आवश्यकता व्यक्त गर्न कहिलेकाँही भने उनीहरु असक्षम हुन्छन ।
विज्ञहरुका अनुसार आजकालको युवतीहरुमा रफ सेक्सको चलन विस्तारै विस्तारै बढ्दै गएको छ र पनि समयसँगै उनीहरुको सेक्सको रुची धेरै हदसम्म बदलिँदै गएको छ ।
तर, यो जरुरी छैन कि हरेक महिलाले रफ सेक्सलाई मनपराउँछन् । त्यसैले यदि तपाई केहि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छन आफ्नो पार्टनरसँग एकपटक राम्रोसँग कुरा गरेर मात्रै त्यस्तो प्रयोग गर्नुहोस् ।